वीरको सिटी–स्क्यानबाट विकिरण चुहावटबारे अध्ययन समितिको प्रतिवेदन : हानिकारक विकिरण चुहावट छँदैछैन – Health Post Nepal
वीरको सिटी–स्क्यानबाट विकिरण चुहावटबारे अध्ययन समितिको प्रतिवेदन : हानिकारक विकिरण चुहावट छँदैछैन
२०७६ असार १२ गते १८:२०
मुलुककै ठूलो अस्पताल वीरमा ७ दिनदेखि रेडियोलोजी सेवा ठम्प छ । एक साताअघि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट)ले गरेको अनुसन्धानको रिपोर्टले सिटी–स्क्यानबाट रेडिएसन चुहावट भएको औँलाएपश्चात् रेडियोलोजी सेवा चल्न नसकेको हो । तर, नास्टको रिपोर्टबारे सत्य–तथ्य पत्ता लगाउन अस्पतालले बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले नास्टको रिपोर्टलाई मिथ्या साबित गरिदिएको छ ।
समितिले बिहीबार अस्पतालका निर्देशकलाई बुझाएको प्रतिवेदनले सिटी–स्क्यानबाट मानव स्वास्थ्यलाई असर पर्ने विकिरण चुहावट नभएको स्पष्ट ठहर गरिदिएको छ । अस्पतालमा कार्यरत वरिष्ठ रेडिएसन विशेषज्ञ डा. कञ्चन अधिकारीसहित चारजना विशेषज्ञ सम्मिलित समितिले अनुसन्धान गरी मानिसलाई असर गर्ने रेडिएसन नभएको रिपोर्ट निर्देशकलाई बुझाएको हो ।
अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेञ्चुरीले हेल्थपोस्टसित कुरा गर्दै भने, ‘समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । विज्ञसँग बसी हामी छफलफ गर्दै छौँ ।’ नास्टले दिएको रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण रहेको डा. सेञ्चुरीले संकेत गरे ।
रेडिएसन चुहावटको वास्तविकताबारे हेल्थपोस्टको जिज्ञासामा समितिका संयोजक डा. अधिकारीले सिटी–स्क्यानबाट मानिसलाई असर गर्ने रेडिएसन चुहावट नभएको प्रमाणित भएको बताए । ‘नास्टले दिएको रिर्पोटमा मेसिनले मेजर गरेको तथ्यांक मात्रै राखिएको छ,’ नास्टको रिपोर्ट अपूर्ण भएकोतर्फ इंगित गर्दै डा. अधिकारीले भने, ‘त्यसको प्रोटेक्सन रिक्वायर्ड किन, कति चाहिन्छ, कति डोजले मानिसलाई हानि गर्छ भन्ने कुरासमेत नास्टको रिर्पोटमा उल्लेख छैन ।’
अस्पतालको सिटी–स्क्यान सेवा अवरुद्ध हुँदा दैनिक ५० देखि ६० जनासम्म बिरामी सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरीका अनुसार सिटी–स्क्यान सेवा अवरुद्ध हुँदा अस्पतालले दैनिक करिब २ लाख गुमाउँदै आएको छ ।
नास्टले रेडिएसन चुहावटको मात्रासमेत उल्लेख नगरी अपूरो रिपोर्ट दिएको संयोजक डा. अधिकारीको भनाइ छ । ‘रेडिएसन कति चुहावट भएको हो, त्यो पनि रिर्पोटमा सही तथ्यांक आएको छैन,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले पारामिटर गर्ने तरिकाअनुसार चेक गर्दा मानिसलाई हानि गर्ने कुनै पनि रेडिएसनको चुहावट छैन ।’
डा. अधिकारीका अनुसार नास्टले अनुसन्धानमा पारामिटरको पनि प्रयोग गरेको छैन, जसको अभावमा तथ्यांक सहीकिसिमको आउँदैन । ‘एकदम कमलाई पनि प्रोटेक्सन रिक्वायर्ड भनेर लेखिदिएको छ, तर प्रोटेक्सन किन चाहियो भनेर उल्लेखै गरेको छैन,’ उनले भने ।
विकिरण चुहावटबारे अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका डा. अधिकारी दाबीका साथ भन्छन्, ‘अस्पतालको सिटी–स्क्यानबाट निस्कने विकिरण कुनै नर्मल मानिसलाई पनि असर गर्नेखालको छैन ।’
दैनिक ६० बिरामी सेवाबाट वञ्चित
नास्टको रिपोर्टलगत्तै सिटी–स्क्यानबाट निस्कने विकिरणले अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर, कर्मचारी, प्राविधिक, स्वास्थ्यकर्मी, बिरामी र त्यसबरपर पर्ने मानिसको स्वास्थ्यमा असर गर्ने भन्दै अस्पतालका कर्मचारीले सेवा ठम्प पारेका छन् ।
विकिरण चुहावट भएको खण्डमा मानिसको शरीर दुख्ने तथा चिलाउने, कपाल झर्ने, मातियाविन्दु हुने, बाँझोपन हुने र रक्तक्यान्सर भई मुत्युसमेत हुन सक्छ ।
मन्त्रालयबाट गठित समितिको प्रतिवेदन आउन बाँकी
विकिरण चुहावटकै विषयलाई लिएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले वीर अस्पतालको सिटी–स्क्यान कक्षमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयले डा. हेमन्त ओझाको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिमा स्वास्थ्यसेवा विभागकी बायोमेडिकल इन्जिनियर पद्मा मिश्र र पाटन अस्पतालका रेडियोलोजिस्ट, मन्त्रालयका उपसचिव बाबुराम खनाल सदस्य छन् । मन्त्रालयको समितिको भने अनुसन्धान जारी नै रहेकाले उसले दिने प्रतिवेदनका लागि प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ ।
के छ नास्टको रिपोर्टमा ?
नास्टले दिएको रिपोर्टमा सिटी–स्क्यानको ढोकाबाट बिरामीकुरुवा बस्ने स्थानसम्म रेडिएसनको मात्रा १३.९४ माइक्रोसिभल्ट रहेको छ भनी उल्लेख छ । सिटी–स्क्यान टेक्निसियन बस्ने ठाउँमा २.१२ माइक्रोसिभल्ट रहेको र चिकित्सकले रिपोर्टिङ गर्ने स्थानमा १.२ माइक्रोसिभल्ट रहेको रिपोर्टले देखाएको छ । त्यसैगरी, बाहिरी करुवा बस्ने ठाउँमा १ हुनुपर्नेमा ०.२४ माइक्रोसिभल्ट रहेको नास्टको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट)
One thought on “वीरको सिटी–स्क्यानबाट विकिरण चुहावटबारे अध्ययन समितिको प्रतिवेदन : हानिकारक विकिरण चुहावट छँदैछैन”
If NAST technical team has produced bad rumour. it is punishable. the team members should be punished.